Owura Martin Amidu Yɛ Manbɔɛfoɔ - HOT STORIES GHANA
Owura Martin Amidu Yɛ Manbɔɛfoɔ
Ɛfiti ɛda a Owura Martin Amidu a Ɔmanpanin Nana Addo yii no sɛ Ɔman Ghana kwaadubɔni soronko kɛseɛ (Special Prosecutor), twerɛɛ krataa tententen a ɛfiri Bono kɔsi Yaane, faa ne dwumadie a ɔde ato fam no ho no, mede maso atoto fam, atietie ahunu sɛ, Papa no yɛ manbɔɛfoɔ.
Ɔnfata sɛ ɔsra yɛn y’afiem’ mpo a yɛto no akonwa ma ɔtena soɔ.
Ɛne sɛn? Ɛsane sɛ Abibifoɔ wɔ abɛbuo bi sɛ: sɛ bomokyikyie firi nsuo ase bɛka sɛ dɛnkyɛm awu a yɛnye no akyinye nti, saa Owura Martin Amidu yi de Ghanaman mma akoma regoro atoprɛ.
Ɛnɛ a, wei yɛ krɔmfoɔ, ɔkyena a, asimasi repɛ me akum me ɛsan sɛ maka sɛ ɔyɛ kɛtɛasehyɛ ne prɔyɛ.
Ɔdii kan de yɛɛ aban dadaa a atwam kɔ no, ɛyɛ Kyiniyɛ Akatamanso (NDC) Aban. Gokafoɔ se: “yɛ reyi kwan na annka wo dan a, wose ɔkwan yi tene”. Osono Kokuroko (NPP) a na ɔnni Aban mu no yɛɛ nhwɛ hann, maa saa Papa Amidu yi twee Aban a na ɔwɔ soɔ saa brɛ no dontori mu, kakyerɛɛ wiase aman nyinaa sɛ Ɔmanpanin Mahama yɛ ɔkromfoɔ takyiamoa a prɔyɛ ne kɛtɛasehyɛ adware ɔne N’aban sɛ dudɔɔ.
Ɛtɔ da a, sɛ saa Manbɔɛfoɔ Martin Amidu yi twerɛ saa animguaseɛ krataa yi bi fa Manpanin Mahama ho a, na manfoɔ no nyinaa bu afu sɛ, ɛte saa deɛ a, yɛnsɛn no ahoma, anaa yɛ mfa awiyammoɔ nhyɛ nekɔn, nto no ntwene ɛpo bunu mu, deɛ ɛhɔ dɔ. Ɛnyɛ nwanwa sɛ saa ne krataa twerɛ no mpo dii mu atimtimban maa Kyiniyɛ Akatamanso dii nkyo wɔ mfeɛ mpem-mienu-ne du-nsia (2016) abatoɔ no mu.
Hwɛ, anaano a yɛ’dwene yɛnho, ‘ɛsu Omanpanin dadaa Rawlings a wate atemono atoa nananom wɔ nseɛdo, Owura Manbɔɛfoɔ Martin Amidu de krataa tenten foforɔ akɔma Manpanin Nana Addo sɛ ɔde ne dwumadie aba awieɛ. Ɔhaahaa nani kaa nsɛm to Ɔmanpanin no ne N’aban so a, woyɛ badwenba, na wogyene wani hwɛ mu komm a, wohunu sɛ ɛyɛ nkotomposɛm ne nnabrabasɛm a ɔde retu mfuturo agu manfoɔ no ani akata nanimguaseɛ so.
Wo, Martin Amidu, ankane “citizen vigilante”, mfeɛ mienu akyi ni a yɛpaa wo hyɛɛ saa Kwaadubɔfoɔ Soronko (SP) yi dibea, wontumi mmɔɔ anomaba mpo kwaadu wɔ prɔyɛ ne kɛtɛasehyɛ ho. Ɛnyɛ mpo Ɔmanpanin Mahama a wosii nekɔn so, miaa nekɔn, amma wannya ahome kɔsii sɛ Ghanafoɔ hwimm neto akonwa no.
Na Agyapa nsɛmsɛm a sikatua nkɔdii obi nsam, a ɛbaa yɛ nkyɛreɛ, na wode rebɛdi akonkosɛm wɔ yɛnso sɛ mmaa nto nwom mferɛ wo, meboa. Gyabrɛ ataseɛ-ataseɛ aka wo, wahu?
Ghanaman aduru bea a yɛhia wɔn wɔwɔ ɔman noho dɔ di dwuma, na y’apagya yafasuo agyina branee bio.
Ɛnyɛ wɔn a wɔsusu sɛ obi redidi agya no nti, sɛ w’anhyɛ ɔno nso afono mu ma a, ɛnneɛ saa Aban koro no nwiri ngu. Sɛ ɛbɛkɔ goal deɛ ɛnkɔ corner.
Wo, Owura Martin Amidu, y’ahunu wo, wo bosome na ɛda so yi, obiara mmfa wo nhyɛ taa mpo, na nka mpo sɛ ɔde w’asɛm ayɛ ahiasɛm.
Sika puduo kyenkyinenkye pepepeepee a Aban de too wo fotoɔ mu sɛ fa bɔ Kwaadubɔ Asoeɛ (OSP) no ho bra no, ɛyɛɛ dɛn na ɛda so da hɔ ma mfuturo rebɔ no yi? Sɛ nka Aban Fotosanfoɔ no de maa wo sɛ wo nni, mmfa nhyɛ w’afuru ma a, anka yɛbɛhunu akyire asɛm mpo?
Ɛnyɛ saa sikakoro no bi ara na wode bɛtua w’adwumayɛfoɔ no ka, a wo ne w’abɛdiakyire no a wose yɛntuaa no ka no ɛka ho bie?
Y’abrɛ wo. Bea a Ghana aduru no, yɛrepem akɔ Bɔhyɛ Asaase no so, yɛnne bere mma wɔn a wɔkura nhoma, retwe yɛnkankorɔ kɔ akyi, ɛsan wɔn afu, ne tirimpɔbɔne nti.
Nyankopɔn nhyira Ghanaman, na Ɔma yɛn daadaa asomdwie wɔ abatoɔ afe yi mu, ne nakyi daa afe nyinaa.
Ɔtwerɛfoɔ no ne: Kwasi Yeboah (Sir Lord)